Fetim-bokatra 2007 – FJKM Ambavahadimitafo Fetim-bokatra 2007 |
Alahady natokan’ny fiangonana hankalazana ny fetim-bokatra ny alahady 01 Jolay 2007. Ny isan’ny olona tonga nankalaza an’Andriamanitra tamin’izany fotoana izany dia teo amin’ny 621 teo ary betsaka ny zanaka am-pielezana tonga nanatrika io fotoana io.
Nanomboka tamin’ny 09 ora maraina ny fanompoam-pivavahana. Taorian’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo dia niantomboka avy hatrany ny famarotana ny vokatra izay nahitana ny vokatra avy amin’ny mpiangona ihany; toy ny vary, harona, sns…
Rehefa tanteraka izany dia nisy ny fiaraha-misakafo tao amin’ny Akany Ralibera Daniel izay nanasana olona teo amin’ny 220 teo.
Ny sampana teto amin’ny fiangonana no niara-nisalaha tamin’ny fanatanterahana io fotoana io; toy ny fanaovana ny sakafo, ny fikarakarana rehetra ary ny fanafanana ny lanonana izany.